कीभ मा5आकर्षणहरू यात्रा समाचार
कीभका attrac आकर्षणहरू
मारिएला क्यारिल | | कीव, के हेर्ने
तिमी मनपराउँछाै पूर्वी युरोप? यो महाद्वीपको एक अंश हो जुन अहिले सम्म पूर्ण रूपमा फेला पारिएको छैन त्यसैले तपाईंले भ्रमण गर्न अविश्वसनीय गन्तव्यहरू फेला पार्नुभयो। कीव यो युक्रेनको राजधानी हो र यद्यपि यो विशाल, हलचल र विश्वव्यापी शहर हो यसको आकर्षण छ।
धेरै जसो भेटघाट गर्न, आदर्श रहनु चार दिन सम्म हुनेछ, तर यो सत्य हो कि कहिलेकाँही एक ठाउँमा यति लामो समय सम्म बस्न सक्दैन, त्यसैले हामी यो मुट्ठीभर आकर्षणहरू जान्न दुई वा तीन दिनको यात्राको बारे सोच्छौं। । Aim तब के तपाईं कीभ मा याद गर्न सक्नुहुन्न के।
2 कीभका attrac आकर्षणहरू
कीभ वा कीभसँग एक छ करीव million० लाख जनसंख्या र बाल्टिक र भूमध्यसागर बीचको व्यापार मार्गहरूको क्रसरोडमा एक महत्वपूर्ण एन्क्लेभको साथ जन्म भएको थियो। तेह्रौं शताब्दीमा युरोपको यस भागलाई मंगोलहरूले आक्रमण गरे र सदाको लागि विभाजित गरियो, त्यस बाहेक यसको भाग्य विदेशी शक्तिको चिह्न थियो।
आज यो शहर डनिपर नदीको दुबै छेउमा फैलिएको छ जसले कालो समुद्रमा छोड्दछ। पश्चिमी भाग सब भन्दा पुरानो हो र सजाइएको छ जंगली पहाडहरू, कीव को प्रसिद्ध पहाडहरु। नदी समुद्री किनारमा उपलब्ध छ र यसका मूल ढोकाहरूको एक प्रणाली छ, जबकि यसको वरिपरि सानो छ नदी, जलाशय, ताल र कृत्रिम पोखरी। यति धेरै पानी शहरले नै त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई प्रदान गर्दछ Be०० समुद्री तटहरू र तीस भन्दा बढी मनोरञ्जन क्षेत्रहरू।
किभसँग एउटा प्रणाली छ बसहरू, मिनी बसहरू, ट्रामहरू, मेट्रो, ट्याक्सीहरू, फ्युनिकुलर र रेल यसलाई बाइपास गर्छ। ट्याक्सीहरू बाहेक प्रणालीले सपाट दर प्रयोग गर्दछ।
पेचार्स्क जिल्ला ऐतिहासिक छ र शहरको बीचमा, नीपर हिल्स र लिप्की क्लोभको बीचमा। नाम बाट आएको हो किभ पेचर्स लभरा गुफाहरू, एक अर्थोडक्स विहार जो १०1051१ मा फिर्ता गुफा भित्र जन्म भएको थियो। आज छ विश्व सम्पदा र शताब्दियौंदेखि यसले यसलाई घण्टा टावर, क्याथेड्रल, भूमिगत गुफा प्रणाली र प्रभावशाली बचाव पर्खालहरूको जटिलमा परिवर्तन गरेको छ।
तपाइँले यो जान्न रोक्न सक्नुहुन्न ग्रेट लाभ्रा बेल टावर, .96 .XNUMX ..XNUMX मिटर अग्लो, डोर्मिसन क्याथेड्रल (दोस्रो विश्व युद्ध पछि पुन: निर्माण गरियो) र अन्य मुरब्बा अन्य पुराना चर्चहरू। आज यो ठाउँ यो संग्रहालय हो, कीव मा सबै भन्दा ठूलो एक।
La मैदान Nezalezhnosti वर्ग यो सोभियत संघको पतन पछि कीवको केन्द्र हो। यहाँ २०० 2004 र २०१ of को क्रान्तिकारी घटनाहरू घटे र यो शहरको पोइन्ट हो जुन विशाल आधुनिक भवनहरूमा केन्द्रित छ, सोभियत वास्तुकलाको विशिष्ट। यो बाट आउँछ Khreshchatyk सडक, चार लेन र एक किलोमीटर लामो संग।
बम र WWII का सेनाहरु यो नष्ट र पछि यो सोवियत शैली मा पनि पुनर्निर्माण गरियो। सप्ताहन्तमा यो पैदल यात्रा गर्ने हो त्यसैले तपाईंलाई यसको भ्रमण गर्ने अवसर मिल्नेछ।
El महान देशभक्त युद्ध को संग्रहालय यो पेचार्स्क लभ्राको नजिक अवस्थित छ र जर्मन - सोभियत युद्धको सम्झना दिलाउने स्मारक जटिल हो। यसको उद्घाटन मे,, १9.१ मा भएको थियो र तपाई ट्या tan्की, सबै प्रकारको विमानहरू, कारहरू, स्मारकहरू देख्नुहुनेछ र तपाईं सोभियत युद्धको गीतहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो विशाल छ युक्रेनकी आमाको स्मारक, बेवास्ता गर्न असम्भव किनभने यो यसको साथ विशाल छ १ 102 मिटर अग्लो। तपाईं के फोटो लिन जाँदै हुनुहुन्छ! दुबैबाट, टाउको उचाईमा उसको प्लेटफर्मबाट र दूरीबाट।
La सेन्ट सोफिया क्याथेड्रल यो कीवको सबैभन्दा पुरानो चर्च हो र हो विश्व सम्पदा। यो पनि धेरै ठूलो साइट हो, घण्टा टावर, क्याथेड्रल र एक स्कूल सहित धेरै भवनहरू सहित। तपाईले अर्को सुनौलो गुम्बजको सेट देख्नुहुनेछ: द सान मिगुएलको गुम्बा। तपाईं यसलाई नि: शुल्क भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। यो मध्य युगको हो तर डब्ल्यूडब्ल्यूआईआईमा ध्वस्त पारियो र पुन: स्थापना गरी पुनः खोलेको हो। यो सजावट र आभूषणहरूले भरिएको ठाउँ हो त्यसैले यदि तपाईंलाई कला मनपर्दछ भने यो महान छ।
यदि तपाईं ठुलो शहरबाट भाग्न चाहनुहुन्छ भने, कीभमा एउटा ठाउँ छ जहाँ तपाईंले जानु पर्दछ: Andriyivskyy वंश। यो स्थान किभको बोहेमियनले बस्नको लागि छनौट गरेको जस्तो छ, जहाँ कविहरू र कलाकारहरू बस्थे, क मोन्टमार्टको भाग्य। उही लाइन मा छ पोडिलसहरको माथिल्लो भागमा। यहाँ भवनहरू साना, रंगीन र रमणीय छन्। सडकहरू साँघुरो छन् र यो फुर्सतको टहलको लागि आदर्श हो।
अहिलेसम्म तपाईसँग पाँचवटा सबैभन्दा धेरै पर्यटकीय स्थानहरू कीवमा छन्, जुन तपाईं पहिलो भ्रमणमा याद गर्न सक्नुहुन्न। पक्कै यो केवल कुरा मात्र होइन जुन युक्रेनको राजधानीले प्रस्ताव गर्दछ, त्यहाँ धेरै संग्रहालयहरू, छिमेकहरू र आकर्षणहरू छन्। त्यहाँ केहि पनि छन् साधारण आकर्षण बाहिर त्यसैले यदि तपाईंसँग समय छ यी नाम र संकेतहरू लेख्नुहोस्:
चेरनोबिल यूक्रेनी राष्ट्रिय संग्रहालय: कीव आणविक उर्जा केन्द्रबाट केवल १०० किलोमिटर टाढा छ। बाहिर तपाईले एम्बुलेन्स, सैन्य जीपहरू र ट्या tank्की देख्नुहुनेछ। सडक १ 100 nuclear1986 को आणविक दुर्घटनाबाट प्रभावित सबै गाउँहरूका नामका संकेतहरू सहित ड्राइभवे एउटा सीढी हो जुन यो साना संग्रहालय हो। यो २ Kh खोरीभा स्ट्रीटमा अवस्थित छ र सोमबारदेखि शनिबार बिहान १० देखि साँझ 29 सम्म खुल्ला रहन्छ। आइतवार र प्रत्येक महिनाको अन्तिम सोमबारमा बन्द हुन्छ।
कीवको गोल्डन गेट: यो एक हो मध्यकालीन गेट शहर पुन: निर्माण गरियो जुन एक पटक शहरको प्रवेश द्वार मध्ये एक थियो। मूल १०1037 को हो र १ 1982 1500२ मा शहरले आफ्नो पहिलो १XNUMX०० वर्ष इतिहास पूरा गर्यो त्यसैले यो पुनःस्थापित गरियो। निर्माण केही विवादास्पद थियो किनकि यो वास्तवमै कस्तो थियो भनेर राम्रोसँग थाहा थिएन, तर अन्तमा वोल्डाइमिरस्का सडकमा रहेको यो इट्टा र काठको संरचना भने रह्यो।
La आर्सेनाल्ना मेट्रो स्टेशन: हो विश्वको सब भन्दा गहिरो निर्माण सबवे स्टेशन। लगभग १०..105.5 मिटर गहिरो! एस्केलेटर असाधारण हो र माथि र तल जान लामो मिनेट लिन्छ, र वास्तवमा तपाईंले प्लेटफर्ममा पुग्न धेरैलाई जोड्नु पर्छ। यो 60० को दशकमा बनाइएको थियो।
राम्रो, तपाइँलाई थाहा छ, तपाइँले कीभमा धेरै देख्न सक्नुहुन्छ जुन धेरै पर्यटक दृष्टिकोण र रेस्टबाट सबैभन्दा परम्परागत बीच रहेको छ। थोरै र तपाइँको यात्रा अविस्मरणीय बनाउन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » कीभका attrac आकर्षणहरू
इस्टरमा पछाडि जानुको लागि १० विचारहरू
के भेराक्रूज, मेक्सिकोमा भ्रमण गर्ने